မြ၀တီ - နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးနေမှု အခြေအနေများ ဆွေးနွေး
Thursday, 12 September 2019 14:08 font size decrease font size increase font size
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်အား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးံ. H.E.Mr. Daniel Patrick Chugg သည် ယနေ့နံနက် ၁ဝ နာရီတွင် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ နယ်စပ်ဒေသများ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ နယ်စပ်ဒေသတွင် နေထိုင်ကြသည့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်ပေးနေမှုအခြေ အနေများ၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရက အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ နယ်စပ် ရေးရာဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သည့် အခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် ပညာရေး၊
ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးနေမှု အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားသည့်ဒေသများ၌ တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများအတွက် စားနပ်ရိက္ခာနှင့် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများဆောင်ရွက်ပေးမှုများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရှေ့ဆက်လက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်သန်းထွဋ် နှင့်တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Read 59 times Last modified on Thursday, 12 September 2019 14:10
More in this category: « မြန်မာ့ ကြံသကြားကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေး နှီးနှောဖလှယ် ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ »